Dino Melaye awụfela oku mkpọghachi - BBC News Ìgbò
Dino Melaye awụfela oku mkpọghachi
Nkenke aha onyonyo Dino Melaye na gọvanọ Kogi steeti were nnukwu esemokwu
Sinetọ Dino Melaye esila n'akwa ọ nọ n'ụlọọgwụ kele ndị mpaghara Kogi-West ọ na-anọchite n'ụlọomeiwu ukwu, maka ịjụ mbọ a na-agba iji kpọghaachi ya ma sị na ya agaghị ekwe ka ajụ ha daa n'ala.
Atụmatụ ịkpọghachi Dino Melaye iji wepụ ya n'ụlọomeiwu nke ukwu bụ Sineti akpụọla afọ n'ala dịka e nwetaghị mmadụ ole iwu ntuliaka kwuru tinyere aka n'akwụkwọ ahụ.
Melaye kwuru n'igwe okwu Twitter sị: "Ana m ekele ụnụ ndị nke m. Chukwu gozie unu, ekele dịrị unu maka ntukwasiobi unu nwere na m. Agaghị m ekwe ka ajụ ụnụ daa n'ala. Aga m akwụgide n'eziokwu ma kwụnyere ndị mmadụ oge niile.
Chukwu gozie Kogi-West.
Ngalaba na-ahụ maka ntuliaka bụ INEC n'aha ịchafụ kwuru n'ụzọ ụtụtụ taa bụ ụka na ọ bụ naanị mmadụ pasentị 5.34 pụtara binye aha ha n'akwụkwọ nke e mere na Satọde, ebe iwu kwuru na ọ bụ ma pasentị 50 mmadụ binye aka n'akwụkwọ mkpọghachi ka e nwere ike i wepụ onye sineti.
Na nchịkọ ka o siri ga, kọmịshọna Inec Benue steeti bụ Prof. Ukertọr Gabriel Moti kwuru na ọ bụ mmadụ otu puku narị na iri asatọ na itoolu, nari asatọ na iri asaa na (189, 870) binyere aka n'akwụkwọ mkpọghachi melaye, ebe naanị mmadụ puku iri abụọ (20,000) bịara maka ikwuputa n'ezie na ha binyere aka n'akwụkwọ nke ọ bụ naani mmadụ puku iri na asatọ na otu narị na iri asaaa na iri anọ na atọ (18,743) ka a hụrụ aha ha.
O kwukwara na ọnụọgụgụ ndị debanyere aha ha maka ntuliaka na Kogi-West dị narị puku atọ, puku iri ise, otu puku, otu narị na iri anọ (351,140).
'Buhari adịghị ike ọrụ' - Ndị na-agụ BBC
Dino Melaye: Ndị uweojii akpọgala ya Lokoja
Ọtụtụ mmadụ apụtaghị nyocha maka ịkpọghachi Dino Melaye
28 Eprel 2018
Ọnwụnwa ọzọ abịaala Dino?
Senegal alụchaala ọgụ Algeria enwere akụkọ
Atiku na Peter Obi akpọtachaala ndị akaebe n'ụlọikpe
Ana m amalite ọrụ n'elekere atọ nke ụtụtụ - Onye Abacha